ग्रेटा थुनबर्ग 'आलोचक लि gender्ग-प्रतिक्रियावादी नैतिक रूपमा दिवालिया बाल-मित्रैलो कायलहरू हुन्': कारणको अन्त: मार्टिन भ्रिजल्याण्ड
ग्रेटा थुनबर्ग कथा स्पष्ट र स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ कुनै कारणको आधारमा, तर पेटको भावनाको आधारमा कुनै पनि प्रकारको आलोचना हटाउने एउटा तरीका। यस साताको अन्त्यमा मैले मेरो निजी फेसबुक टाइमलाइनमा सन्देश पोस्ट गर्‍यो र सूचित गरियो कि मेरो पोष्टिंग स्वीकार्य व्यवहारको सीमा भन्दा पर थियो। र त्यो प्रतिक्रियाको अंश मात्र हो, जुन मैले सब भन्दा बढि पोष्ट गरेको भिडियो हेर्न सक्ने व्यक्तिको भन्दा मैले छिटो प्राप्त गरें। डेभिड इकेले बनाएको त्यो भिडियो, जसमा उनले स्पष्ट रूपमा वर्णन गरेका छन् कि मौसमको तथ्या .्क हेरफेर गरिएको देखिन्छ, स्पष्ट रूपमा हेर्नु लायक थिएन। र त्यो सहि प्रभाव हो जसका लागि ग्रेटा थुनबर्ग प्रयोग भएको देखिन्छ। अन्तर्निहित सन्देश हो "हामीसँग छलफलको लागि लामो समय छैन र आलोचक लि gender्ग प्रतिक्रियावादी नैतिक रूपमा दिवालिया बाल-मित्रैलो कायलहरू हुन्'
मैले आइकेको भिडियोको साथमा राखेको पाठ पनि डेभिडसँग सम्बन्धित छ र यो सबै राम्रोसँग स्थापित आलोचना सुन्न नसक्ने योजनाको अंशजस्तो देखिन्छ, तर यसलाई 'सही' र 'खतरनाक' को रूपमा जलाउने, कुनै सामग्री नभए पनि। सुन्न। "कारण" र "ठोस आलोचना" लाई "राजनीतिक हिसाबले गलत" र "खतरनाक" लाई कलंकित गरीएको छ। यो अब कारण र कारणको बारेमा हुन सक्दैन। अब देखि यो सबै 'को बारे मा छतपाईलाई भनिएको कुरा सुन्नुहोस्र युवाहरूले ग्लोबल वार्मिंगको माध्यमबाट उन्मूलनको खतराका साथ अबदेखि पाठ्यक्रम सेट गरिरहेका छन्। तल त्यो पाठ छ जुन मैले डेभिड आईके भिडियोको साथ राखेको छु:
तपाईं जलवायु परिवर्तन चकमा नेतृत्व हुनेछ। तर पक्कै पनि तपाईंले यसलाई सुन्नुहुन्न, किनकि यो 'दक्षिणपन्थी षड्यन्त्र इडियट्स' सँग जोड्नको लागि इच्छुक (अंग्रेजीका लागि: ध्यानपूर्वक 'ब्राण्ड' को रूपमा बनाईएको छ) जसलाई ब्रेक्सिट विफलता र व्यापारिक युद्धका कारण आर्थिक नोक्सानीका लागि दोष दिन सकिन्छ। ; मानिसहरु जसले विश्वास गर्छन कि सरीसृपहरु को दुनिया को नियन्त्रण। झूटा अनमस्क्या something यस्तो चीजमा जलाइन्छ जुन पूर्ण बेवकूफहरूको एक पेशा हो, त्यसैले हामी अब यसलाई सुन्न गर्दैनौं।
ग्लोबल वार्मिंग साइप ध्यान सबैभन्दा कान्छी पुस्ताहरूमा केन्द्रित छ, किनकि उनीहरूसँग प्रचार प्रसारको ज्ञान छैन (जसरी प्राय वयस्कहरू जस्तो, वैसे पनि)।
'ग्लोबल वार्मिंग' को बारेमा शंकास्पद डोनाल्ड ट्रम्प र बोरिस जॉनसनसँग जोडिएको छ। यदि तपाईं त्यसपछि अर्थव्यवस्था क्र्यास गर्न दिनुहोस् र ती ती दायाँ-विख्यात इडियट्सको जुत्तामा राख्नुभयो भने, तपाईंले 1x मा शx्कास्पदसँग व्यवहार गर्नुभयो। दायाँपट्टि सावधानीपूर्वक निर्माण गरिएको ब्रान्डमा 'आलोचना' लिंक गरेर (ग्लोबलविरोधीहरू, मौसम परिवर्तन विरोधी, राष्ट्रवादीहरू, महिला-मित्रवत र षडयन्त्र सिद्धान्तहरू) यदि तपाईं अर्थव्यवस्था क्र्याश गर्नुहुन्छ भने तपाईं सबैलाई यो दायाँ-वि brand्ग ब्रान्डसँग क्रोधित गर्न सक्नुहुन्छ। दीर्घकालीनमा आलोचना भंग गर्ने यो सब भन्दा सजिलो र प्रभावकारी तरीका हो। यो डिजाइन द्वारा छ।
हामीले नियन्त्रणित विपक्षी प्यादहरूसँग व्यवहार गरिरहेको कारणले धेरै ध्यान आकर्षण गरेको छ किनकि उनीहरूलाई मुख्यधारको मिडिया ध्यान (जस्तै डेभिड इके, एलेक्स जोन्स र अरू धेरै) ले धकेलेको हो किनभने यी प्यादेहरू यससँग जोडिएको थियो। "दाँया प wing्क्ति" अंग्रेजीमा चिन्ह लगाउनुहोस्। र अब हामी स्टेजमा पुगेका छौं कि यस ब्रान्ड खतरनाक 'सही' लाई कलंकित गर्नुपर्नेछ। तर्कको हरेक रूप अब प्रासंगिक छैन: "आलोचक खतरनाक हुन्छन्"। त्यो प्रोग्रामिंग हो जुन हामी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देखीरहेका छौं, ग्रेटा थुनबर्ग मुख्य भूमिकामा।
लि gender्ग र बाल-मैत्री नक्कल थप रूपमा नियन्त्रित विपक्षी मोहरा रोबर्ट जेन्सेन द्वारा अभिनय गरिएको थियो, जसले तलको भिडियोमा भन्छन् कि उनले ग्रेटालाई उनको टाउको माथि लगाइदिनु पर्छ। के तपाई साँच्चिकै सोच्नुहुन्छ कि यस तथाकथित विद्रोहीले यो सबै अनायासो भनिन्छ? होईन, उहाँ राम्ररी सोचविचार गरेर होशियारीका साथ डिमगोगिक स्क्रिप्टको पालना गर्नुहुन्छ।
इके देखि जेन्सनसम्मका सबै नियन्त्रित विपक्षी प्यादहरूको भूमिका यो हो कि उनीहरूले धेरै सत्य घोषणा गर्न सक्दछन्। हामी अब योजना गरिएको चरणमा पुगेका छौं कि सत्यले फेरि कहिले पनि फरक पार्दैन। Greta Thunberg त्यो धेरै नै टेस्टोस्टेरोनको साथ खतरनाक बाँदर प्रजातिहरूको सामना गर्नेछ। प्रजातिको रूपमा मानिसको निश्चित अन्त्य दृश्यमा छ। डोनाल्ड ट्रम्प र बोरिस जॉनसनलाई प्रचार क्यामेराको लेन्सको लागि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक चरणको फ्लोरमा यस लिपिमा अभिनय गर्नका लागि अनुमति दिइयो। यो दायाँपट्टि ध्यानपूर्वक निर्माण गरिएको ब्रान्डको परिणाम हो (अ right्ग्रेजीमा 'दायाँ-वि wing्ग'): सत्य दायाँको ब्रान्डसँग सम्बन्धित छ र त्यसैले सामाजिक सिink्कको इनारमा खसालिन्छ।
मानिस सामान्यतया एक बिट माचो वा महिलालाई मन नलागी (मामिला हेर्नुहोस्) ट्रम्प en जनसन), षडयन्त्रमा विश्वास गर्छन, राष्ट्रवादी र "आफ्नै देश पहिले" संरक्षणवादी हुन्। तिनीहरू ग्लोबलविरोधी छन् र मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिंगमा विश्वास गर्दैनन्। तिनीहरू सबै आर्थिक दु: खका कारण हुन् किनकि तिनीहरू आवश्यक परेमा आलोचनात्मक र जिद्दी पुरुषत्वको हुनु पर्छ। आलोचनात्मक र सचेत हुनु खतरनाक प्रजातिहरूको लागि चीज हो जसलाई 'म्यान' भनिन्छ। हामीले भविष्यमा सुन्नु पर्दैन। हामी 'शर्ममा पार्ने' को साथ शुरू गर्नेछौं। अब देखि ती सबै व्यक्तिहरूले ग्रेटा थुनबर्ग जीआईएफ प्राप्त गर्नेछन् (लेखको साथ फोटो हेर्नुहोस्) जुन भन्छन्:कस्तो हिम्मत!"
भाषणको अन्त दृश्यमा छ। हामी विश्वव्यापी रूपमा एकदम सावधानीपूर्वक निर्माण गरिएको प्रचार अभियानको अवलोकन गरिरहेका छौं, जहाँ दायाँपट्टिको ब्रान्डलाई राजनीतिक शक्तिमा गति लिन र नेतृत्व लिनको लागि अनुमति दिइयो, र अन्तमा यसलाई समाधान गर्नुहोस्। यसले विश्व सरकारतर्फको अन्तिम स्प्रिन्टको लागि पूर्ण रूपमा मार्ग खाली गर्दछ, जहाँ आलोचकहरू फेरि कहिले सुन्न पाउँदैनन् र गुलागतिर अदृष्य हुन्छन्।
स्रोत लिङ्क सूची: trouw.nl, thetimes.co.uk, smh.com.au
ट्याग: 17, बोरिस, आलोचकहरू, डोनाल, विशेष, वैश्विक, Greta Thunberg, hoax, जेन्सेन, जनसन, आलोचना, पटाकास्ट, psyop, रबर्ट, स्क्याम, skeptics, ट्रम्प, तापक्रम
30 सेप्टेम्बर 2019 मा 11: 16
यसको मतलब के हो कि तपाइँ चीजहरू भावनात्मक बनाउनुहुन्छ, त्यो ठीक छ?
ग्लोबल वार्मिंग प्रोपेन्डिष्टवादी भन्छन्, यदि तपाई चीजलाई भावनात्मक बनाउँनुहुन्छ भने केहि गलत छैन
पूर्व ED ग्रीनपीस अंतर्राष्ट्रीय
30 सेप्टेम्बर 2019 मा 11: 34
यस लेखको साथ बफादारीमा यो लेख पनि हेर्नुहोस्: "जलवायु संदिग्धता महिलाको घृणासँग मिल्छ"
30 सेप्टेम्बर 2019 मा 14: 53
तपाईंले तिनीहरूलाई दिनु पर्छ, तिनीहरूले यसलाई राम्रो चरणहरूमा निर्माण गरे। सबै स्क्रिप्टको अनुसार हुन्छ ...
30 सेप्टेम्बर 2019 मा 18: 51
ID यो सबै डेल्फी प्रविधि अनुसार भयो
डेल्फी (ने) टेकनीक "नागरिकहरुलाई एक समूहको सामना गर्न अभिप्रेरित गर्न अभिजात वर्गले पहिल्यै निर्णय गरिसकेका छ। प्रायः यसले केहि नयाँ कार्यक्रम वा सरकार जान चाहेको दिशा समावेश गर्दछ, तर नागरिक खरीदमा चाहिन्छ। प्रविधी खास गरी असहमतिलाई अलग पार्ने र मतभेदकहरू क्रूर छन् भन्ने सुझाव दिएर, कुनै सहानुभूति नभएको, वा केवल मूर्ख छन् भनेर विरोधी विपक्षी आवाजलाई बन्द गर्न र बन्द गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो। स्थानीय सरकारले सामान्यतया परामर्श फर्मलाई भाडामा लिन्छ जसका कर्मचारीहरू यस प्राविधिक प्रशिक्षणमा प्रशिक्षित छन् वा सरकारले पहल गरेका निष्कर्षमा पुग्ने गरी यस्तो तरिकामा नागरिकहरूलाई सोच्न लगाउँछ कि उनीहरूको विचार हो, सरकारको होइन।
1 अक्टोबर 2019 मा 10: 00
21 उत्तर हेर्नुहोस्
3 दिन अघि
'ग्लोबल वार्मि' 'को बारेमा कुनै सफा कुराकानी कहिले पनि हुन सक्दैन मिल्छ एलिफान्टको रूममा एलिफान्टको बारेमा कुरा गरिरहेको जुन GEENGINEERING। यो ग्लोबल वार्मिंग होईन, यो क्लाइमेट कन्ट्रोल हो। आयनोस्फेरिक हीटरबाट, स्ट्रैटोस्फेरिक एयरोसोल (केमटेरिल), ट्रिलियन वाट लेजरहरू, जहाजहरूबाट बन्कर इन्धन ... आदि, मौसम बनेको छ र अब प्राकृतिक छैन। त्यो सत्य हो।
« पाठ To Spach (TTS) र lifelike holograms with Microsoft Hololens 2
'जलवायु अस्वीकार' कलंक साजिश सिद्धान्त, दक्षिणपन्थी राजनीति र पेटको भावना संग जोडिएको छ »
कुल भ्रमण: 13.907.534